“Lautaro Martínez waa sida Suárez oo kale, waxaana ka rabaa inuu yimaado Barcelona” – Lionel Messi – Gool FM
(Barcelona) 20 Feb 2019. Kabtanka kooxda kubadda cagta Barcelona ee Lionel Messi ayaa wareysi uu ku bixiyay wargeyska “Mundo Deportivo” ee dalka Spain wuxuu kaga hadlay dhowr arrimood ee ku saabsan kubadda cagta iyo mustaqbalkiisa naadiga reer Catalonia.
Waxyaabihii uu Lionel Messi kaga hadlay wareysigan ayaa waxaa sidoo kale ka mid ahaa xiriirka uu la leeyahay saaxiibkiis xulka qaranka Argentina ee Lautaro Martínez, wuxuuna muujiyay sida weyn uu ugu qanacsan yahay awoodiisa ciyaareed.
Barcelona ayaa la gashay Real Madrid iyo kooxo badan oo Yurub ah tartanka loogu jiro saxiixa xiddiga reer Argantina ee Lautaro Martínez, kaasoo heshiiska uu ku joogo naadiga Inter Milan lagu burburin karo qiimo dhan 111 milyan oo euro.
Lionel Messi ayaa si cad ugu baaqay maamulka kooxda Barcelona inay keenaan weeraryahanka reer Argentina ee Lautaro Martínez garoonka Camp Nou, waxaana hadaladiisa ka mid ahaa:
“Waxaan rajeynayaa inuu halkaan yimaado, oo aan si wadajir ah u dagaalano si aan ugu guuleysano wax walba uu qeyb ka yahay tartanka UEFA Champions League”.
“Waa ciyaaryahan cajiib ah, xilli hore ayey iska cadeed inuu noqon doono ciyaartoy kubada cagta ah ee aad u wanaagsan, haddana wuxuu cadeeyay kartidiisa”.
“Waa nin aad u xoog badan, wuxuuna ku xoogan yahay weerarka labda dhinac ah, wuu yaqaanaa sida loo dhaliyo, isla markaana kubadda loo heysto, waa ciyaartoy isku dhafan, wuxuuna si wanaagsan nagala qeyb galay tartanka Copa America”.
Waxyaabaha ay isaga midka yihiin Lautaro Martínez iyo ciyaaryahanka ay isku kooxda yihiin ee reer Uruguay Luis Suárez, ayaa wuxuu sheegay Lionel Messi:
“Lautaro wuxuu leeyahay waxyaabo ay isku mid ka yihiin isaga Luis Suárez, labaduba waxay si fiican u adeegsadaan jirkooda, si fiican ayeyna u garaacaan kubadda marka aan helno fursad aan goolal ku dhalin karno, sidoo kale waxaa jira waxyaabo badan oo ay aad isaga dhow yihiin”.
“Waxaan mar walba sheegaa in ciyaartooyda wanaagsan ay had iyo jeer isla qabsadaan ugu dambeyntii, haddii ay tahay inay wada ciyaaraan sidaas ayey sameyn karaan”.
“Luis Suárez wuxuu leeyahay qibrad badan wuxuuna ka caawin karaa Lautaro Martínez inuu la qabsado horyaalka Spain”.